Abuukaate Cabdiwaaxid: Farmaajo Xoog Ayuu Ku Fadhiyaa Madaxtooyada, 30 Sano Ayuu Doonayaa – Goobjoog News
Waxaa weli isa soo taraya falcelinta ka dhanka ah muddo kordhinta ay golaha shacabka u sameeyeen madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Abuukaate Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo Goobjoog News oo uga warramay sharci ahaan muddo kordhinta golaha shacabka u sameeyeen Farmaajo ayaa sheegay in aaney dastuuri aheyn, oo Farmaajo isa siinayo awood aanu laheyn.
‘”Farmaajo waxaa awood madaxweyne la siiyey February 8, 2017-kii, waxaa loo igmaday afar sano oo ku eg February 8, 2021, xilligaas ka hor muwaadin jiray ayuu ahaa, oo ma sheegan karin madaxweyne, xaq uma laheyn, hadda waa sidaas oo kale, ma sheegan karo, hadda xaq uma leh, hadda xaq uma leh, baarlamaan ma siin karo, baarlamaan waqtigiisu dhammaaday waxba ma kordhin, boob weeye, waa nin xoog ku fadhiya guryihii madaxtooyada la oran jiray oo saraha iska ah”.
Waxaa Abuukataha qabaa in ay furan tahay in beesha caalamka ay ilaaliso xasiloonida isla markaana ay soo farageliso, gaar ahaan ciidamada AMISOM oo inta la qabto la geeyo maxkamadda caalamiga.
Dhanka Abuukaate Cabdiwahaab ayaa hadalkiisa kusoo gabagabeeyey in Farmaajo uu damacsan yahay 20 sano oo xukun ah“ Dimoqoraadiayadda tiro ma aha, dhariiqada hadda uu isku siiyey labada sano waa keligii talisnimo, wax ku qasbay ma garan karo, laakin waa muuqata inuu 20 sano iyo sano u socdo”.